नायक पल शाह रातको ११ बजे सिलिन्डर ट्रकमा बोकेर हिँडे, पलको कामको चौतर्फी चर्चा ! – SUDUR MEDIA
May 13, 2021 AdminLeaveaComment on नायक पल शाह रातको ११ बजे सिलिन्डर ट्रकमा बोकेर हिँडे, पलको कामको चौतर्फी चर्चा !
अभिनेता पल शाह काठमाण्डौँबाट रातको ११ बजे ,१०० वटा सिलिन्डर ट्रकमा बोकेर पल शाह बारा जिल्लाको औधोगीक सिमरामा अक्सिजन भर्नका लागि गएका छन् । पलले अक्सिजन भरेर गाउँ गाउँ र अस्पतालमा पुग्दा बिरामीहरुका आँखाभरी आँशु देखियो । आफू निरन्तर काममा खटेर परेको बेला महामारीमा जस्तो सुके अप्ठ्यारोमा पनि लागि पर्न पछि नपर्ने पल साँच्चिकै महान् छन् । पल जस्ता छोरा देशले पाउनु नै ठूलो कुरा हो । सच्चा मनका धनी पललाई हृदयदेखि सलालम गरौँ । जसले अहिले निशुल्क अक्सिजन बाँड्ने काम गरेका छन् ।
थप समाचारहरुः ‘वर्षा र सहकालका देवता’ रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण आज हुँदैछ । हरेक वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदाको दिन मच्छिन्द्रनाथलाई रथमा विराजमान गराउने चलनानुसार आज दिउँसो रथारोहण गर्न लागिएको हो । रथारोहण गर्ने साइत बिहानैको थियो । सो समयमा साङ्केतिक रूपमा मच्छिन्द्रनाथलाई हल्लाउने काम भयो । रथ निर्माणको काम अझै जारी रहेकाले दिउँसो ४ देखि ५ बजेभित्रमा रथारोहण गर्ने भएको सो गुठीसँग सम्बन्धित ज्योतिषी दैवज्ञ कीर्तिकिरण जोशीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रथ निर्माणको काम सम्पन्न भएपश्चात रथारोहण गर्न जाने तयारी भइरहेको छ ।”
शिशिर भण्डारीले आफ्नी श्रीमतीको अगाडी उ’ठब’स गरेको भिडियो भा’ईरल भएपछि ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
छ बर्षपछि चि’हान खनेर हेर्दा जिउदै भेटियो रातको 12 बजे झा’क्रीले देखाए सोच्नै नसकिने चमत्कार, पुरै गाउले मिडियामा ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)